Football Khabar » गोल्डेन बुट दौड : अन्तिम दुई खेलमा जादु चलाउने रोनाल्डोको दाउ !
गोल्डेन बुट दौड : अन्तिम दुई खेलमा जादु चलाउने रोनाल्डोको दाउ !
इटालियन सिरी ए लिग फुटबलमा यो सिजनका अन्तिम दुई खेल मात्रै बाँकी छन् । यी दुई खेलअघि युभेन्टसका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबैभन्दा चर्को दबाबमा छन् । उनी यो सिजन युरोपियन गोल्डेन बुट जित्ने दौडमा रहेकाले बाँकी खेलमा उनीमाथि धेरैभन्दा धेरै गोल गर्नुपर्ने दबाब छ ।
हालको अवस्थामा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका रोवर्ट लेवान्डोस्की ३४ गोलसहित सबैभन्दा शीर्ष स्थामा छन् । साथै, लाजियोका सिरो इम्मोबाइल समान ३४ गोलसहित उनीसँगै उभिएका छन् । हालकै अवस्थामा अन्तिम दुई खेल बाँकी रहँदा गोल्डेन बुटमा सिरो प्रमुख दाबेदार हुन् । किनभने, लेवान्डोस्कीसँग समान ३४–३४ गोल भएको अवस्थामा पनि उनले अझै दुई खेल खेल्नै बाँकी छ ।
तर, युभेन्टसका रोनाल्डोको यात्रा निकै कठिन छ । उनले पनि अझै अन्तिम २ खेल नै खेल्न बाँकी छ । तर, उनी हाल लेवान्डोस्की र सिरोभन्दा ठीक ३ गोलले पछि छन् । उनले ३१ गोल गरेका छन् । यसअघि लाजियोका सिरोले ह्याट्रिक गर्दा रोनाल्डो पछि परेका हुन् । सिरोले ह्याट्रिक गर्दा रोनाल्डोले भने १ गोल मात्रै गरेका थिए ।
यदि सिरोले अबका २ खेलमा गोल नगरे पनि उनले लेवान्डोस्कीसँग संयुक्त रूपमा गोल्डेन बुट जित्ने पक्का छ । तर, रोनाल्डोले भने हालको ३ गोलको ग्याप पार गर्दै थप गोल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बाँकी २ खेलमा सिरोले थप गोल गर्न सकेनन् र रोनाल्डोले कम्तीमा ३ गोल मात्रै गरेर ३४ गोल बनाउन सके लेवान्डोस्की, सिरो र रोनाल्डोले संयुक्त रूपमा गोल्डेन बुट जित्नेछन् ।
तर, यदि रोनाल्डो एकल रूपमा गोल्डेन बुट जित्न चाहन्छन् भने उनले बाँकी खेलमा धेरै गोल गरेर लेवान्डोस्कीलाई त पछि पार्नुपर्छ नै, सँगै सिरोले थप गोल गरे उनको बढेको गोल संख्यालाई पनि उछिन्न सक्नुपर्छ । नत्र, सिरोले बाँकी २ खेलबाट मात्रै १ गोल गरे पनि पहिलोपटक गोल्डेन बुट जित्ने पक्का छ ।
तसर्थ, रोनाल्डो अबका बाँकी २ खेलबाट सकेसम्म धेरै गोल गर्ने प्रयासमा हुनेछन् । त्यसका लागि उनलाई दुवै खेलमा ह्याट्रिक गोल आवश्यक पर्छ । उनले बाँकी दुै खेलमा ह्याट्रिक हान्न सके अझै पनि गोल्डेन बुटमा उनको सम्भावना खुलै छ । तर, ३५ वर्षका रोनाल्डोका लागि यो सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । यद्यपि, असम्भव नै भने छैन ।
रोनाल्डोको टिम युभेन्टसले आज राति लिगको ३७औं खेल अवे मैदानमा क्याग्लिअरी र त्यसपछि लिगको अन्तिम खेल आफ्नो घरमा रोमासँग खेल्नेछ । यो सिजन उनले लिगमा कूल ३१ गोल गरिसकेका छन् । गत सिजन उनले कूल २१ गोल मात्रै गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति १४ श्रावण २०७७, बुधबार ११:४८